တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု | ခရီးသွားသတင်းများ
Mariela Carril | 07/09/2021 17:00 | တရုတ်နိုင်ငံ, ယဉျကြေးမှု
တရုတ်နိုင်ငံ ၎င်းသည်ထောင်စုနှစ်၊ ကြွယ်ဝပြီးမတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုရှိသောအံ့သြဖွယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘာသာစကားများ၊ ပွဲတော်များ၊ ကိုယ်ပိုင်ရာသီခွင်များ၊ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများနှင့်ကွဲပြားသောကမ္ဘာတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်တရုတ်စကားပြောရပိုလွယ်ကူလျှင်ထိုဘာသာစကားကျောင်းသားများအလုံးအရင်းရှိလိမ့်မည်ဟုငါထင်သည်။ ဒါပေမယ့်တရုတ်ဘာသာစကားကတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးပါတယ်။
နောင်တမရရအောင်၊ ဒီနေ့ငါတို့ကြီးမြတ်တဲ့အကြောင်းပြောကြရမယ် တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု.
2 တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာတရားများ
3 တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု: အစားအစာ
4 တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု: ရာသီခွင်
5 တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု: ပွဲတော်များ
တရုတ်နိုင်ငံ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်လူ ဦး ရေ ၁.၄ ဘီလီယံကျော်ရှိပြီးတိုင်းပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်းကိုပြီးမြောက်ရန်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာသည်။ ထို့အပြင်ယခုအချိန်အတန်ကြာတွင် "စနစ်နှစ်ခု၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ" (အရင်းရှင်စနစ်နှင့်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်) ဟူသောအယူအဆနှင့်လက်ချင်းချိတ်လျက်ဖြစ်လာသည်။ ပထမဆုံးကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအင်အား.
တရုတ်တွင်ပြည်နယ် ၂၅ ခု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၅ ခု၊ အလယ်ပတ်လမ်းအောက်ရှိမြူနီစီပယ်လေးခုနှင့်မကာအိုနှင့်ဟောင်ကောင်တို့ရှိအထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသနှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်ပြည်နယ်တစ်ခုအနေနှင့်ထိုင်ဝမ်ဟုလည်းအခိုင်အမာဆိုသော်လည်း၎င်းကျွန်းသည်တရုတ်တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းလွတ်လပ်သောပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ်ကျန်ရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည်ကြီးမားသောနိုင်ငံဖြစ်သည် နိုင်ငံ ၁၄ နိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ်ရှိသည် y ၎င်း၏ရှုခင်းများသည်ကွဲပြားသည်။ သဲကန္တာရများ၊ တောင်များ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများ၊ ချောက်များ၊ ကုန်းမြင့်များနှင့်အပူပိုင်းဒေသများရှိသည်။ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုသည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကတည်းကမွေးဖွားလာခဲ့သော၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှု
၎င်းသည်၎င်း၏အနှစ်တစ်ထောင်တည်ရှိမှုတစ်ခုလုံးနီးပါးတွင်ဘုရင်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် ၁၉၁၁ တွင်ပထမမင်းဆက်ကိုဖြုတ်ချသောပထမပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်မရ။ ဤသဘောကိုကြည့်ရန်ကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည် နောက်ဆုံးဧကရာဇ်, Bernardo Bertolucci ၏အလွန်ကောင်းသောရုပ်ရှင်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ဂျပန်သည်တရုတ်ပိုင်နက်မှဆုတ်ခွာသွားသည် ကွန်မြူနစ်တွေကပြည်တွင်းစစ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ် သူတို့ကအစိုးရကိုဖိအားပေးတယ်။ ထို့နောက်ရှုံးနိမ့်သောတရုတ်များသည်ထိုင်ဝမ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာပြီးပြည်မမှအစဉ်အမြဲပိုင်ဆိုင်ထားသောသီးခြားပြည်နယ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာအပြောင်းအလဲတွေ၊ ဆိုရှယ်လစ်ပညာရေး၊ စုပေါင်းလယ်ယာတွေ၊ အငတ်ဘေးနဲ့နောက်ဆုံးတော့ ၂၁ ရာစုမှာတိုင်းပြည်ကိုနေရာပေးတဲ့ကွဲပြားတဲ့လမ်းစဉ်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဘာသာပေါင်းစုံတိုင်းပြည် သူတို့ဘယ်မှာနေလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တာအိုဘာသာ၊ အစ္စလာမ်၊ ကက်သလစ်နှင့်ပရိုတက်စတင့်မရ။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကိုလေးစားသောကြောင့်ပြည်သူတို့၏အလွန်အရေးကြီးသောကဏ္ aspect ဖြစ်သည်။
ဤဘာသာများသည်တရုတ်ပြည်ရှိမြို့ကြီးများ၌တည်ရှိပြီး၎င်းမှာနေထိုင်သောလူမျိုးစုပေါ်မူတည်သည်။ ၎င်းကိုရှင်းလင်းရကျိုးနပ်သည် လူမျိုးစု ၅၀ ကျော်ရှိသည် တရုတ်တွင်လူများစုသည်ဟန်ဖြစ်သော်လည်းယေဘူယျအားဖြင့်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုကျော်ဖြတ်သည်မှာအမှန်ဖြစ်သည် တာအိုဘာသာနှင့်ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ၊ ၎င်းသည်နေ့စဉ်ဘဝအတွင်းစိမ့်ဝင်နေသောဤဒဿနများဖြစ်သည်။
တရုတ်လူမျိုးအများစုသည်ခိုင်လုံသောယုံကြည်ချက် (သို့) ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအချို့ကြောင့်အချို့သောဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုလိုက်နာကြသည်။ ဘိုးဘေးများ၊ ခေါင်းဆောင်များ၊ သဘာဝလောက၏အရေးကြီးမှု (သို့) ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းသည်အဆက်မပြတ်ရှိသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာယနေ့ဤဘာသာများထဲမှအများစုနှင့်ပြဌာန်းထားသောအရာမဟုတ်ပါ။ သူတို့အားလုံးဟာအရမ်းဟောင်းနွမ်းပြီးချမ်းသာပြီးသစ်ကိုင်းတွေကနေရာအနှံ့ကနေကျလာတယ်။
El ဗုဒ္ဓဘာသာ ဒါဟာမူလအစ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ လောက်ကအိန္ဒိယမှာမရ။ ဟန်တရုတ်လူမျိုးများသည်တိဗက်လူမျိုးများကဲ့သို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်။ တိုင်းပြည်တွင် Wild Goose Pagoda သို့မဟုတ် Jade Buddha Temple ကဲ့သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာရေးနေရာများစွာရှိသည်။
ဤအတောအတွင်း တာအိုဘာသာသည်နိုင်ငံ၏ဇာတိဖြစ်သည် ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း ၁၇၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ၎င်းကို Lao Tzu မှတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Tao ၏လမ်းစဉ်နှင့် "ရတနာသုံးပါး"၊ နှိမ့်ချမှု၊ ကရုဏာနှင့်ခြိုးခြံချွေတာမှုတို့ကိုအခြေခံသည်။ ၎င်းသည်ဟောင်ကောင်နှင့်မကာအိုတို့တွင်အခိုင်အမာတည်ရှိသည်။ Taoist နေရာများအနေနှင့်၎င်းသည် Shandong ပြည်နယ် Shai တောင် (သို့) Shanghai of the City of the God of Temple၊ ရှန်ဟိုင်းတွင်ရှိသည်။
အတွက်လည်းနေရာရှိတယ် အစ္စလာမ် တရုတ်မှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၃၀၀ ခန့်ကအာရပ်နိုင်ငံများမှဆင်းသက်လာသည် ဥပမာ၊ ယနေ့တွင် Kazak, Tatar, Tajik, Hui သို့မဟုတ် Uyghur တွင်ယုံကြည်သူ ၁၄ သန်းခန့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Kashgar ရှိ Xi'an ၏ Great Mosque (သို့) Idgar Mosque (Mosque) ရှိသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်အခြားခရစ်ယာန်ဘာသာပုံစံများကိုစူးစမ်းလေ့လာသူများနှင့်ကုန်သည်များမှတရုတ်နိုင်ငံသို့ရောက်လာသည်၁၈၄၀ တွင်ဘိန်းစစ်ပွဲများအပြီးတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးပိုမိုခိုင်မာလာသည်။ ယနေ့တရုတ်ခရစ်ယာန် ၃ သန်း၊ ၄ သန်းနှင့်ပရိုတက်စတင့် ၅ သန်းနီးကပ်လာသည်။
ကြိုက်တယ်။ ငါဘာပြောနိုင်လဲ။ တရုတ်အစားအစာကိုကြိုက်တယ် ၎င်းသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများတွင်အလွန်ကွဲပြားသည် ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့အရသာတွေနဲ့ပျင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တရုတ်အစားအစာယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းသင်သိဖို့လိုတာကအဲဒါဘဲ ၎င်းကိုကွဲပြားသောအချက်အပြုတ်နည်းလမ်းများဖြင့်ဒေသများသို့ခွဲခြားထားသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် မြောက်တရုတ်၊ အနောက်၊ တရုတ်အလယ်၊ အရှေ့နှင့်တောင် တစ်ခုချင်းစီတွင်အရသာ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ချက်ပြုတ်ပုံနည်းလမ်းများရှိသည်။ တရုတ်လူမျိုးများသည်အစာစားခြင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးအမှတ်အသားအတိုင်းလိုက်နာတတ်သည် tag ကိုမရ။ ဧည့်သည်တစ် ဦး စီထိုင်သည့်နေရာတွင်အရေးကြီးသည်၊ ဧည့်သည်သည်အခြားဖြစ်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ ထိုအထူးတစ်စုံတစ်ယောက်သည်မည်သူမျှမခံစားရသည်အထိ သင်တို့သည်လည်းပထမ ဦး ဆုံးဆန္ဒပြုရန်ရှိသည်။
နေ့လည်စာစားချိန်၌သင်အသက်ကြီးသူများကိုအရင်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ အခြားသူများကဲ့သို့ပန်းကန်လုံးကိုယူရမည်၊ သင့်လက်ချောင်းများတွင်အမိန့်တစ်ခုရှိသည်၊ ၎င်းသည်သင်နှင့်နီးစပ်သောပန်းကန်ပြားများမှအစားအစာများကိုယူရန်အဆင်ပြေသည်။ စားပွဲပေါ်ဆန့်ပြီးအနှောက်အယှက်မပေးပါနဲ့၊ ပါးစပ်ကိုမဖြည့်ပါနဲ့၊ ပါးစပ်အပြည့်နဲ့ပြောပါ။ အစာထဲမှာတုတ်ထိုးမထားပါနဲ့ ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေကိုသူတို့ကအလျားလိုက်ထောက်ခံတယ်။
သီးခြားစာပိုဒ်သည်၎င်းနှင့်ထိုက်တန်သည် တရုတ်ပြည်မှာလက်ဖက်ရည်မရ။ ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလုံးပါ။ လက်ဖက်ကိုဒီမှာထုတ်လုပ်ပြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစားသုံးတယ်။ မင်းမှာအနက်၊ အနီနဲ့အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်သာရှိတယ်လို့မင်းထင်ရင်မင်းအရမ်းမှားတယ်။ လက်ဖက်ရည်အကြောင်းအရာအားလုံးသိရန်သင်၏ခရီးကိုအခွင့်ကောင်းယူပါ။ လက်ဖက်၏အရည်အသွေးသည်အနံ့၊ အရောင်နှင့်အရသာအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သော်လည်းလက်ဖက်ရည်နှင့်ခွက်၏အရည်အသွေးသည်ထိုက်တန်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သည်လည်းအရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်လေထု၊ နည်းစနစ်များ၊ တေးဂီတမရှိ၊ အခင်းအကျင်းကိုဂရုစိုက်သည်။
တရုတ်ရာသီခွင် ၎င်းသည် ၁၂ နှစ်စက်ဝန်းဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုကိုယ်စားပြုသည် ၎င်းတွင်အချို့သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ကြွက်၊ နွား၊ ကျား၊ ယုန်၊ နဂါး၊ မြွေ၊ မြင်း၊ ဆိတ်၊ မျောက်၊ ကြက်၊ ခွေးနှင့်ဝက်။
Este ၂၀၂၁ သည်နွားနှစ်ဖြစ်သည်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင်ပါဝါ၏ရိုးရာသင်္ကေတဖြစ်သည်။ နွားနှစ်တစ်နှစ်သည်ပေးဆပ်ခြင်းနှင့်ကံကောင်းခြင်းများပေးမည့်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမကြာခဏထင်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ကံမကောင်းဘူးလို့ယူဆတဲ့လက္ခဏာတွေရှိပါသလား။ ဟုတ်ပုံရတယ် ဆိတ်နှစ်မွေးတာမကောင်းပါဘူးမင်းကခေါင်းဆောင်မဟုတ်၊ နောက်လိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်သင်သည်နဂါးနှစ်တွင်မွေးဖွားလျှင်အံ့သြစရာကောင်းသည်။ အမှန်တော့နဂါးနှစ်၊ မြွေ၊ ဝက်၊ ကြွက်၊ ဒါမှမဟုတ်ကျားနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကကံအကောင်းဆုံးဘဲ။
ဤမျှကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူအမှန်တရားသည်တိုင်းပြည်၌ပွဲတော်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပွဲများများပြားသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး၊ နှင့် အများစုကိုတရုတ်လပြက္ခဒိန်အရစီစဉ်သည်။ နာမည်အကြီးဆုံးပွဲတော်များမှာ ဆောင်း ဦး ရာသီပွဲတော်၊ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး၊ ဟာဘင်ရေခဲပွဲတော်၊ တိဘက်ရှိ Shoton ပွဲတော်နှင့်နဂါးလှေပွဲတော်
ထို့နောက်တွင်ဘေဂျင်း၊ ရှန်ဟိုင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ Guilin၊ ယူနန်၊ တိဘက်၊ ကွမ်ကျိုး၊ Guizhou တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပွဲတော်များရှိသည်မှာမှန်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ သင်သွားသောအခါဖြစ်ပျက်မည့်အရာကိုစစ်ဆေးပါ။
ရန်အဖြစ် တင်သွင်းသောပွဲတော်များ တရုတ်ပြည်တွင်လည်းလူသိများသည်ကိုနာမည်ပေးရန်၊ ချစ်သူများနေ့၊ ခရစ်စမတ်နေ့၊ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်နေ့သို့မဟုတ် Halloween တွင်ကျင်းပသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ပွဲများနှင့်ပွဲတော်များကိုအတိအကျထည့်သွင်းစဉ်းစားသောခရီးစဉ်များကိုစီစဉ်သောခရီးသွားအေဂျင်စီများရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » ယဉျကြေးမှု » တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု